पेट्रोल पम्प कि पेट्रोल बम ? घरको खुड्किलामा पम्प, भुईंतलामा भण्डारण ट्याङ्की - Nepal Bahas Nepal Bahas
पेट्रोल पम्प कि पेट्रोल बम ? घरको खुड्किलामा पम्प, भुईंतलामा भण्डारण ट्याङ्की
प्रकाशित मिति : २६ जेष्ठ २०७९, बिहीबार ११:३३
काठमाडौं उपत्यकामा वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेका केही पेट्रोल पम्प भने सडक विस्तारका क्रममा घर भित्रै पसेका छन्। घर भित्रैबाट सञ्चालित पम्पलाई नेपाल आयल निगमले निर्वाध इन्धन बिक्री वितरणका लागि अनुमति दिइरहेको छ।
♦ यशोदा भण्डारी
गत आइतबार काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १२ टेकुस्थित कनक पेट्रोल पम्पमा इन्धन राख्ने ट्याङ्कीको ढकन वेल्डिङ गर्ने क्रममा ग्यास विष्फोट हुँदा किशोरी साहको मृत्यु भयो। पर्सा जगन्नाथपुर गाउँपालिका–३ घर भई हाल कालीमाटी बस्ने १८ वर्षीय दिपककुमार साहको वीर अस्पतालको ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ।
प्रहरी वृत्त कालीमाटीका प्रमुख डीएसपी अनिल घिमिरेका अनुसार यो पेट्रोलियम पदार्थ जस्तो अत्यन्त प्रज्वलनशील पदार्थ भण्डारण गर्ने संरचना निर्माणमा भएको लापर्बाहीको परिणाम हो। जबकी कनक पेट्रोल पम्प विद्यमान ऐनले तोकेको मापदण्ड विपरीत छ। यो पम्प स्थानान्तरण गर्न दबाब परेपछि साविककै स्थानमा व्यवस्थित् ढंगले चलाउने अथवा स्थानान्तरण गर्ने भन्ने विषयमा विस्तृत कार्ययोजना पेश गर्न आयल निगमले पत्र पठाएको थियो। नभन्दै मापदण्ड अनुसारका पूर्वाधार नभएकै परिणाम यही पम्पमा आइतबार विष्फोटको घटना हुन पुग्यो। अहिले निगमले तत्काल पम्प बन्द गर्न कनक आयललाई पत्राचार गरेको छ।
त्यसो त काठमाडौको हकमा मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेको कनक मात्र हैन। यस्ता थुप्रै मापदण्ड विपरीतका पम्प सञ्चालनमा छन्। सरोकारवालाहरू, काठमाडौ उपत्यका भित्र घना आवादी क्षेत्रमा मापदण्ड विपरीतका धेरै पेट्रोल पम्प सञ्चालनमा छन्। जसका कारण काठमाडौं उपत्यकामा जोखिम बढेको छ। सडकपेटीको छेउमा पैदलयात्रीलाई बनाइएको संरचना मात्र हैन, घना बस्तीमा जोडिएका पम्पले समेत तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्।
पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेता विनियमवाली २०७५ अनुसार घरहरूको नजिक पम्प सञ्चालनका सन्दर्भमा प्रष्ट मापदण्ड तोकिएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेका केही पेट्रोल पम्प भने सडक विस्तारका क्रममा घर भित्रै पसेका छन्।
घर भित्रैबाट सञ्चालित पम्पलाई नेपाल आयल निगमले निर्वाध इन्धन बिक्री वितरणका लागि अनुमति दिइरहेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र भवन निर्माण आचारसंहिता २०७२ को व्यवस्था विपरीत सञ्चालनमा रहेका यस्ता जोखिमयुक्त पम्प हटाउन महानगरपालिकाले समेत चासो दिएको छैन।
यसका लागि काठमाडांैको सोह्रखुट्टेस्थित् विष्णुमती खोलाको पुलसँगै जोडिएको कोतस् धुक आयल स्टोर अर्को गज्जबको उदाहरण हो। यो पेट्रोल पम्प साढे ४ तले घरको भुइँतल्लामा चलिरहेको छ। घरको सटर भित्रै पेट्रोल र डिजेल पम्प राखिएको छ। घरको खुड्किलामा पम्प, अनि चार तले घरको भुईंतलामा भण्डारण ट्याङ्की। न सुरक्षाका लागि अतिआवश्यक पानी भण्डारण गर्ने ठाउँ न पर्याप्त खुला जमिन। सँगै बैंक तथा वित्तीय संस्था र घना बस्ती। आफूलाई पम्पको म्यानेजर बताउने नवराज भट्टले घर भित्रको ग्राउण्ड फ्लोरको कोठामा तेल भण्डारण गर्ने गरेको बताए। कोठाभित्रै ट्याङ्की छ, डिजेल–पेट्रोल त्यही ट्याङ्कीमा भण्डारण हुन्छ। पम्पमा पर्नसक्ने दुर्घटनाका समयमा आवश्यक पर्ने पानी कोतस् धुक आयल स्टोरले घरको छतमा राख्ने गरेको छ। कुनै दुर्घटना भइहालेमा, बाथरुमबाट पाइप लगाएर मात्र पानी ल्याउन सकिन्छ। यस्तो चरम लापर्बाहीका बीच, कोतस् धुक आयल स्टोरले दैनिक ४ हजार लिटर पेट्रोल र २ हजार लिटर डिजेल बेच्ने गरेको छ।
काठमाडौं महानगरपालिका–१६ मा रहेको यो पम्प, २०४३ सालदेखि स्थानीय उत्तमदास मानन्धरले चलाइरहेका छन्। ‘सुरुमा पम्प घरबाहिरै थियो’ मानन्धरले भने– ‘सडकको मध्य विन्दुबाट ११ मिटरको दूरीमा खोलेको पम्प ०६९र७० मा सडक विस्तारका क्रममा घरभित्र पसेको हो।’ जबकि पेट्रोल पम्पको नजिकै ग्यास पसल, टायर पसल तथा किराना पसलसहित सोही भवनको माथि मानिसको बसोवास समेत छ। अझ रोचक त के छ भने, बालाजुमा रहेको यो कोत थुकु पेट्रोल पम्प र बालाजु पेट्रोल पम्प बीचको दूरी नै जम्मा ६० मिटर रहेको छ। नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले यस्ता पम्पका कारण सिर्जना हुन सक्ने जोखिमबारे समग्रमा अध्ययन भइरहेको र यसलाई चाँडै व्यवस्थित गरिने बताए।
पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेता विनियमवाली २०७५ अनुसार नगरपालिका भित्र पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्न कम्तिमा ७५० वर्ग मिटर क्षेत्रफल जमिन चाहिन्छ। पेट्रोल पम्प मानव बस्तीबाट कम्तीमा ५०० फिट पर हुनुपर्छ। एउटा पम्पबाट अर्को पम्पबीचको दूरी ३०० मिटरभन्दा कम हुनुहुँदैन। अत्यधिक प्रज्वलनशील यस्ता इन्धन बिक्री गर्ने डिपो सडकबाट २० मिटरको दूरीमा हुनुपर्छ उपत्यकाका अधिकांश पेट्रोल पम्पले यो मापदण्ड मिचेका छन्। विद्यमान ऐन विपरीत आर्थिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रभावमा पाइला–पाइलामा मापदण्ड विपरीतका पम्प चलिरहेका छन्। न महानगर अथवा नगरपालिकाले यस्ता संरचना व्यवस्थित गर्न सकेको छ न नेपाल आयल निगमले नै इन्धन आपूर्ति बन्द गरेर पम्पलाई व्यवस्थित गर्न सकेको देखिन्छ।
पट्रोल पम्प अत्यन्त जोखिमयुक्त संरचना हो। कसैगरी आगलागी भयो भने त्यसले वरपरका बस्ती नै खरानी बनाउँछ। त्यसैले सुरक्षाका दृष्टिले पेट्रोल पम्प सञ्चालनका लागि आवश्यक मापदण्ड प्रष्ट तोकिएको हो तर आयल निगमले तोकेको मापदण्ड अधिकांशले पालना गरेका छैनन्। नेपाल आयल निगमका प्रवत्ता विनितमणि उपाध्याय ‘पेट्रोल पम्पमा अग्नि नियन्त्रण सम्बन्धी उपकरण अनिवार्य राख्नुपर्ने र त्यस्ता उपकरणलाई समयसमयमा परीक्षण गर्नुपर्ने’ नियम रहेको बताउँछन्। सर्वसाधारणले पेट्रोल पम्पमा इन्धन खरिद गर्दा म सुरक्षित छु भन्ने अनुभूति पम्प सञ्चालकहरूले दिनसक्नुपर्छ, हामीले सबै पेट्रोल पम्पलाई यो निर्देशन दिने गरेका छौं– प्रवक्ता उपाध्यायको दाबी छ। निगमका अनुसार पेट्रोल पम्पहरूको नियमन, अनुगमन गर्ने जिम्मा गुणस्तर नियन्त्रण तथा अनुगमन विभागको हो र उक्त विभागले नियमित अनुगमन गर्ने गरेको छ।
सडकको छेउ र बाक्लो जनघनत्व भएको ठाउँमा जताततै पम्प सञ्चालनमा रहेको सन्दर्भमा प्रवक्ता उपाध्यायले पम्पको अवस्था र पूर्वाधार हेरेर कतिपय पम्पहरूलाई मापदण्ड पूरा गर्न अथवा अन्यत्रै सार्ने कार्ययोजना पेश गर्न सचेत गराइरहेको बताए।
सडक विस्तार तथा आवास क्षेत्र विस्तारपछि काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेका अधिकांश पेट्रोल पम्प मापदण्ड अनुसारका छैनन्, नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता उपाध्यायले भने– अहिले साझा पट्रोल पम्प समेत मापदण्ड विपरीत भए भन्ने रिपोर्ट विभागले दिएको छ। हामी सबैसँग नियमित सम्पर्कमा छौं।
पेट्रोल पम्पमा आगलागी भइहालेमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने क्षमतायुक्त पूर्वाधार सँगै जनशक्ति पनि आवश्यक पर्छ। अधिकांश पेट्रोल पम्पमा केही दुर्घटना भए त्यहाँ दमकल पुग्नैपर्छ। यता दमकललाई भने उपत्यकामा भइरहने सानातिना आगलागीका घटनामा दौडिन भ्याइनभ्याइ हुन्छ।
काठमाडौंको बालाजु, त्रिपुरेश्वर, सुनधारा, टेकु लगायत क्षेत्रमा २०–२५ मिटरको दूरीमा पम्प सञ्चालन भइरहेका छन्। बालाजुमा रहेको कोतस् थुकु पेट्रोल पम्प र बालाजु पेट्रोल पम्पको दूरी करिब ६० मिटर रहेको छ। त्यस्तै माछापोखरी क्रिस्टल पेट्रोल पम्प र क्रिस्टल फ्युल सप्लायर्स मुस्किलले ३० मिटरको दूरीमा छन्। काठमाडौको जडिबुटीमा २५ मिटरको दूरीमा रहेका दुई पम्प मध्ये एउटा पम्प सडक विस्तारका क्रममा हटेको छ।
यस्तै भद्रकालीदेखि सोल्टीमोडसम्मको डेढ किलोमिटरको दूरीमा ७ वटा पेट्रोल पम्प चालु अवस्थामा छन्। सबै पम्पले पेट्रोल भण्डारण गर्दाको मापदण्ड, आगलागी नियन्त्रण लागि राख्नुपर्ने पूर्वाधार, सुरक्षा पर्खाल लगायत मापदण्ड पालना गरेका छैनन्। आयल निगमका अनुसार, एउटा पम्पमा घटीमा २० हजार लिटर डिजेल र १२ हजार लिटर पेट्रोल भण्डारण हुन्छ। यस हिसाबले उपत्यकामा सञ्चालित पम्पमा करिब ३० लाख लिटर डिजेल र १८ लाख लिटर पेट्रोल भण्डारण भइरहेको हुन्छ। यत्रो ज्वलनशील पदार्थ भण्डारण गर्ने पम्पहरू सुरक्षा संवेदनशीलाताको दृष्टिले पूरै उदासीन छन्।
विनियमवाली विपरीत खोलिएका यस्ता पेट्रोल पम्पहरू कुनै टाइम बम भन्दा कम छैनन् कुनै पनि बेला विस्फोट हुन सक्छन्। यसले अकल्पनीय क्षति पुर्‍याउन सक्छ। यसबारे सरोकारवाला निकायले किन चासो देखाएका छैनन् रु मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन भइरहेका यस्ता पम्पहरूले सानोतिनो आगलागी निभाउन प्रयोग गरिने स्प्रे, बालुवा र पर्याप्त पानी समेत राखेका छैनन्। केही पम्पमा आगो निभाउन प्रयोग हुने फायर एक्सटिंग्विसर ९अग्निशमन यन्त्र० झुण्डिएका छन् तर अधिकांशको प्रयोग अवधि गुज्रिएको छ।
दुई वर्ष अगाडि प्रधानमन्त्री कार्यालयले काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेको पेट्रोल पम्पले मापदण्ड पालना नगरेको गुनासो सम्बोधनका लागि, नेपाल आयल निगमलाई पत्र पठाएको थियो। त्यसलगत्तै निगमले उपत्यका भित्र सञ्चालनमा रहेका १८ पेट्रोल पम्पलाई १५ दिन भित्र पम्प स्थानान्तरणको कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन दिएका थिए। निगमको फितलो कारबाही, राजनीतिक प्रशासनिक दबाबसँगै व्यवसायीको अटेरीपनका कारण न कुनै कार्ययोजना पेश भयो न मापदण्ड विपरीतका पेट्रोल पम्पहरू कतै सरे। टेकुको कनक पम्प र वालाजुको कोतस् धुक आयल स्टोरलाई त्यसवेला नै निगमले अन्यत्र सार्ने कार्ययोजना पेश गर्न भनेको थियो। आजसम्म यी दुबै पम्पले निगमको निर्देशन बेवास्ता गरेर कारोवार गरिरहेका छन्, निगमले पनि यी पम्पका नाममा निरन्तर इन्धन लोड गर्ने अनुमति दिइरहेको छ। जसले गर्दा उपत्यका जोखिमयुक्त पम्प सञ्चालकहरू निरुत्साहित पटक्कै छैनन्।
काठमाडौंका धेरैजसो पेट्रोल पम्प सडकसँगै जोडिएका छन् भने धेरैले सडक पेटी नै कब्जा गरेका छन्। नेपाल आयल निगम अथवा काठमाडौं महानगरपालिका कसैले पनि यसबाट निम्तने जोखिम न्यूनिकरणमा चासो दिएका छैनन्। सरोकारवाला निकाय कै मिलेमतोमा पेट्रोल भण्डारण गर्दाको मापदण्ड आगलागी नियन्त्रणका लागि राख्नुपर्ने पूर्वधार सुरक्षा पर्खाल लगायत मापदण्ड मिचिएको छ। मापदण्ड अनुसार काठमाडौं उपत्यका भित्र सञ्चालन भएका पम्पले १।२० मिटर अग्लो पर्खाल लगाएर त्यसमाथि ०।९० अग्लो चेनलिग फेन्सिङ गनुपर्ने नियम छ। त्यस्तै बिक्री स्थलका सबै उपकरण अर्थिङ गर्नुपर्छ। ६ थान फायर एक्सटिंग्विसर एक हजार लिटरको पानी ट्याङकी राख्नुपर्छ। दस लिटरको चार थान बाल्टीमा बालुवा भरेर तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ। खन्ने कोदालो देखि साबेलसम्म तयारी अवस्थामा हुनुपर्छ तर व्यापारीहरूले सरोकारवाला निकायको मुखमा बुझो लगााएर घना बस्तीको बीचमा जताभाबी व्यापार गरिरहेका छन्। यस्तै मनोमानी नियन्त्रणका लागि नागरिकले गुनासो गरेपछि, काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि यही बीचमा चक्रपथ क्षेत्रमा रहेका १७ वटा पेट्रोल पम्प तत्काल हटाउन आयल निगमलाई सिफारिस गरेको थियो। आयल निगम प्रशासनले भने टेरपुच्छर लगाएको छैन।
‘यसलाई राज्यले व्यवस्थापन पनि गरेको छैन। यसलाई सरसर्ती हेर्दा यी पम्पहरू अव्यवस्थित भएको, सानो भएको देखिन्छ तर हामीले जुन बेला लाइसेन्स लिएका थियौं, त्यसले पूर्णरूपले बिक्रेता नियमावली पालना गरेर नै प्राप्त गरेका थियौं, अहिले बस्ती बढेसँगै मापदण्ड विपरीत देखिएको हो, मध्यमार्गी विकल्प खोजिनुपर्छ।’
पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले पम्पको सुरक्षा मापदण्डको सन्दर्भमा जिज्ञासा राख्दा ‘पहिला व्यवसायीले पम्प सञ्चालन गरेपछि मात्र बस्ती विस्तार भएकाले स्थानान्तरणको विषय सजिलै सम्बोधन नहुने तर्क गर्छन्। अब पम्प अगाडि भएर पछि बस्ती भयो भने हाम्रो देशमा पम्प र बस्ती एकै ठाउँमा र व्यवस्थित गर्ने कुनै कानुनी प्रावधान छैन’ प्रधानले भने– ‘यसलाई राज्यले व्यवस्थापन पनि गरेको छैन। यसलाई सरसर्ती हेर्दा यी पम्पहरू अव्यवस्थित भएको, सानो भएको देखिन्छ तर हामीले जुन बेला लाइसेन्स लिएका थियौं, त्यसले पूर्णरूपले बिक्रेता नियमावली पालना गरेर नै प्राप्त गरेका थियौं, अहिले बस्ती बढेसँगै मापदण्ड विपरीत देखिएको हो, मध्यमार्गी विकल्प खोजिनुपर्छ।
शहरी क्षेत्रमा पेट्रोलिय पदार्थको खपत अत्यधिक बढ्न थालेपछि पम्पको संख्या बढेको हो। राज्यले इन्धनको विकल्पमा अरु ऊर्जास्रोतको खपत बढायो भने यस्ता पेट्रोल बम स्वतस् विस्थापित हुन्छन्, उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना भन्छन्। जोखिम न्यूनीकरण र आधुनिक प्रविधि भिœयाउने भन्दै सरकारले नमूना ९स्मार्ट० पेट्रोल पम्प बनाउने योजना ल्याएको हो, त्यो कार्यान्वयन भयो भने पम्पहरूको व्यापार व्यवसाय स्वतस् घट्ने छ, आफैं बन्द हुनेछन्। नेपाल आयल निगमले शहरी क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका परम्परागत पम्पलाई विस्थापन गर्न भन्दै कम्तिमा २० वटा नमुना पेट्रोल पम्प आफैंले निमार्ण गर्ने र सञ्चालनमा ल्याउने अवधारणा ल्याएको भए पनि उक्त योजना समेत कार्यान्वयनमा नआएको तिमल्सिनाले बताए।
तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौं उपत्यका भित्र अहिले करिब एक सय असी वटा डिजेल तथा पेट्रोल पम्प सञ्चालनमा छन्। पेट्रोलियम जस्तो अति संवेदनशील र प्रज्वलनशील पदार्थ उपभोक्तालाई बेच्दा समेत कैफियत गर्ने व्यवसायीले व्यवसाय सञ्चालन मापदण्डमा चरम मनोमानी गरेका छन्। पूरै शहर पेट्रोलको ट्यांकी माथि ठडिए जस्तै बनिरहेको छ। आगलागी अथवा विस्फोट भइहालेमा के गर्ने भन्ने विकल्प कसैसँग पनि छैन।